ခင်ဦးသာ| January 8, 2013 | Hits:1,704
5 | | ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းက ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တနေရာတွင် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အစည်းဝေး ကျင်းပနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – phophtaw.org)
ကချင် အရပ်သားများကို စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးနှင့် ပစ်ခတ်နေ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment thihamin January 8, 2013 - 9:24 pm	One for Allစာတမ်းလေးကတော့ အတော်အဓိပ္ပါယ်လေးနက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးစုကိုလည်း လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စာတမ်းလေးအောက်မှာ ပါရှိအောင် ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Reply	mee mee January 9, 2013 - 4:28 pm	They forgot Bamar in Myanmar.They can not do anything.Wait and see.Just for show.
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးရန် အောက်တိုဘာတွင် မသေချာ
တနိုင်ငံလုံး သေနတ်သံတွေ တကယ် တိတ်တော့မလား
ရခိုင် ALP အဖွဲ့ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဝေးနေဆဲ
တပြည်လုံး အပစ်ရပ်ရေး လက်မှတ်ထိုးပွဲ အောက်တိုဘာတွင် ကျင်းပမည်ဟု သူရ ဦးရွှေမန်းပြော
မွန်ပြည်သစ်နှင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ တိုက်ခိုက်မှု မှားယွင်း ပစ်ခတ်ခြင်းဟု ဆို